Meland Vana Kirabhu - Dhizaini magazini
Vana Kirabhu Iyo purojekiti yese yapedza kutaura kwakanakisa kwerunhi rwemubereki-mwana mumba yekutamba, kuratidza huwandu hwakakwana hwekuzadzikiswa uye kusimba mukurira uye kurondedzera kwenzvimbo. Iyo yekunyengera mutsara dhizaini inobatanidza nzvimbo dzakasiyana dzinoshanda uye inoziva huchenjeri hwevashanyi vanoyerera. Rondedzero yenzvimbo, zvakare, inobatanidza nzvimbo dzakasiyana kuburikidza nedanho rakakwana uye inotungamira vatengi kuti vafarire rwendo runoshamisa rwekudyidzana kwemubereki nemwana.
Zita rechirongwa : Meland, Vagadziri zita : Li Xiang, Izita remutengi : X+Living.
Iyi yakanakisa dhizaini anokunda yegoridhe dhizaini mucherechedzo mune zvigadzirwa zvemwenje uye mapurojekiti emagetsi ekugadzira makwikwi.	Iwe unofanirwa kunyatso kuona iyo yegoridhe mibairo-inokunda vagadziri 'dhizaini portfolio kuti uwane zvimwe zvakawanda zvitsva, zvitsva, zvekutanga uye zvekugadzira zvigadzirwa zvemwenje uye magetsi ekugadzira mapurojekiti anoshanda.
Vana Kirabhu Li Xiang Meland